SIDA LOO QALAJIYO HAWO-MAREENKA KORANTADA KORANTADA, MICROWAVE IYO AEROGRILL: XEERARKA ASAASIGA AH - WIXII MARTIDA
Hawthorn waa hab fiican oo lagu yareyn karo walaaca. Kufsi yar oo berry ah oo lagu shubo shaaha aad jeceshahay, waxaad dareemi doontaa nasasho dhamaystiran iyo isku dhafka tamarta.
Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad xasuusato in haweenku tahay antiseptic dabiiciga ah. Neefsashada murqaha waa caawiyaha ugu fiican.
Waa hagaag, haddii haweenku ay ugu yaraan mararka qaarkood kuugu jiraan cuntadaada. Tani waxay ka dhigan tahay inaad marwalba hesho fitamino badan iyo nafaqooyin.
Hawthorn waa la cuni karaa cunto kasta - waxaa lagu daraa firiley, jalaatada waxaa la cunaa, sidoo kale waxaa la cunay midho kale iyo beruud. Bloodyndheer iyo bislaanshaha xilli waa mid aad u gaabansidaas darteed ha ilaawin inaad soo saaro miro this faa'iido leh muddadaas laga bilaabo August ilaa September.
Xusuuso in hawshu ay tahay halka laga helo fiitamiin dabiici ah c iyo sidoo kale omega 3. Fiitamiinadaas waxaa lagu magacaabaa fitamiino qurux badan. Marka laga soo tago waxtarka qiimaha leh ee habka wadnaha iyo xididada mindhicirrada, haweenku wax uma yeeli doonto quruxdaada. Xitaa Ruushka qadiimiga ah, haweentu waxay u adeegtay sidii meel kale oo caan ah oo faa'iido leh oo noocyada kale ee berry ah, sababtoo ah maadada fiitamiin ee haweenka ayaa marar badan ka weyn tan kale ee berry iyo miraha kale.
Maqaalkani waxa aanu rabnaa inaan ogaanno sida loo badbaadiyo haweeneyda oo ugu raaxaysto ilaa inta suuragal ah. Nooc kasta oo siyaabo ah oo lagu keydiyo kaydka iyo ilaalinta waxaa jira fikrad ah in qallajinta berry ay aad u waxyeelo u leedahay nafaqooyinka. Sidaan oo kale ama aan ahayn, waan fahmi doonnaa maqaalkani, waxaanan helaynaa runta, sidoo kale waxaan ku barayaa sida si habboon u qallajiso hawada qalabka korantada, microwave, iyo guud ahaan guriga.
Halkee baan ku qalajin karaa?
Su'aashu waa sax, laakiin haddii aad uga jawaabto qorraxda, markaa waxaad noqonaysaa khalad. Xaqiiqdii, haweenku waa berri oo aan marnaba lagu beddelin raajada ultraviolet. Ninka ayaa sidoo kale ka fogaaday qorraxda. Xasuuso, aadista xeebta, waxaannu ku dhuujinaa kareemyo kala duwan oo ka ilaaliya raajooyinka qorraxda. Sidaas awgeed waa inaynu ku kalsoon nahay qoraxda qorraxda. Dhab ahaantii, Hawthorn waa in aanay la xiriirin rayshada, isagoo ka soocaya geed.
Xaqiiqdu waxay tahay Ultraviolet wuxuu si buuxda u dilaa dhammaan nafaqooyinka xataa saacad ah soo-gaadhsiinta berry. Bal qiyaas waxa dhici doona haddii haweenku ku dhejiyaan qorraxda tooska ah maalin ka badan.
Dabcan, dhammaantani waa mid aad u murugo, laakiin nin ayaa soo saaray qalab badan oo u ogolaanaya inuu qalajiyo berry at guriga, isagoo aan caddayn qoraxda. Dabcan, hababka qalajinta ayaa si aad ah uga duwan midba midka kale, sidaas darteed hawshayadu waa inaan eegno mid kasta oo aan ka soo baxno gabagabadayada.
Ka hor inta aadan sii wadin qalajinta hawo-qallalan ee qalabka korantada, microwave, si taxaddar leh u akhri tilmaamaha si looga fogaado khaladaadka.
Hawthorn marka hore waa in si habboon loo diyaariyaa, markaa markaa habka qallajinta oo dhan ayaa si sax ah u dhici doona. Hawthorn waxaa si taxadar leh loo xalliyaa. Waa inaad ka saartaa noocyada kala duwan ee walxaha, caleemaha, iyo geeddi-socodkeena ma jiro meel loogu talagalay berry cayayaanka ah iyo miraha aan dhicin.
Sidoo kale, ha ilaawin in haweenku si fiican loo dhaqo. Waxaa jira laba siyaabood oo loo sameyn karo tan. Adiga waad gashan kartaa hawada adoo biyo socda, ama si deg deg ah uga tag biyo diirran.
Inta lagu jiro waqtigan, wasakhda iyo boodhka oo dhan waxay ka baxaan berriinka waxay bilaabayaan inay ka baxaan dusha sare waxayna ku sii jirtaa biyaha. Markaa kadib waxaad heleysaa berrinka oo ku dhaq biyo socda.
Marka xigta waa inaad fiiro gaar ah si aad u qalajiso berry. Ka hor inta aysan galin mid ka mid ah qalabka taxanaha ah, waa in la qalajiyaa. Waxaad u baahan tahay inaad berry gashato meel qallalan oo aad sugto dhowr saacadood ilaa ay ka buuxsanto qalalan. Markaa kadib waxaad bilaabi kartaa isku diyaarinta qalajinta dhabta ah ee berry ah ee jiilaalka.
Maxaa la qallajin karaa?
Haddii aad waydiiso su'aasha: "Sidee loo qallajin karaa haweenka qalabka korontada?", Markaa waa inaad u diyaargarowdaa nidaam adag oo waqti badan, saacado badan ah. Faa'iidada nidaamkaan waa in aad arki karto habka qallajinta marka hore iyo, haddii loo baahdo, xakamee socodka kuleylka mashiinka.
Dhibatadu waa in wakhtiga wax lagu karsado uu si aad ah u faafo oo waqti dheer qaadan karo. Ma aha in qof kastaa go'aamiyo inuu sugo waqti badan.
Xayndaabku waa inuu ku yaallaa bartamaha qaybta kuleyliyaha si uu kuleylku si siman u qaybiyo. Ha dhigin saxaarada aad u sareeya ama aad u hooseeya. Waxaad halis u tahay inaad qallajisid berriga, ama si ka baxsan u qalajin.
Qalajinta waxay qaadataa wax ka badan dhowr saacadood foornada qashinka ah, iyo qaybaha miro ee ku habboon foornada qiiqa ayaa aad u yar.
Sida loogu talagalay microwave, markaa waxaad u baahan tahay inaad si haboon u xakameyso. Faa'iido la'aanta qaabkani waa isticmaalka awood weyn, oo lagu daray in aad iska hubin kartid u diyaargarow wakhti kasta.
Waqtigee ayay tahay
Qalabka korantada qalajiyaha korontada wuxuu soconayaa ugu yaraan shan saacadood, oo aan ka badnayn sideed, haddii kale waxaad halis ugu jirtaa gubasho ama gebi ahaanba daadineysaa berrida. Ma jiraan noocyo qalajiyaha korontada, sidaa daraadeed dhammaantiis waa inaad sameysaa heerkulka si sax ah.
Iyadoo qalajinta foornada kuleylka waxaa ku jira qalajinta ilaa siddeed ama toban saacadood sababtoo ah xaqiiqda ah in cufnaanta kuleylka aan la mid ahayn sida foornada. Sida aerogrill, kaliya heerkulka iyo xawaaraha blower ayaa sidoo kale muhiim ah halkan. Sidaa darteed, heerkulka la dhigo ee foornada diirran iyo foornada ayaa ka duwanaan doona.
Qallajinta miraha makiinadda mikrowave waxay u dhexeysaa dhawr maalmood sababtoo ah xaqiiqda ah in dhammaan nooca berry ah kuma haboona gudaha. Hawthorn waxaa loo diraa microwave qaybo yaryar, laakiin qaabkani waa mid qumman haddii aad haysatid miraha yar.
Sida foornada microwave, halkan waxaa lagama maarmaan ah in la dejiyo habka u dhigma 300 watti ama xitaa 600 watts at calaamadda foornada. Haddii aadan haysan calaamadahaas, ka dibna deji habka soo socda ka dib markii la jarayo, mararka qaarkood heerkulku wax yar ka dhigo inta udhaxaysa habka soo socota ee 600 watts. Marka berry uu diyaar u yahay, ku noqo calaamadda 300 watt.
Sidaa daraadeed su'aasha muhiimka ah ee soo socota ee soo baxaya inta lagu guda jiro geedi socodka qalajinta: "heerkee heerkulka?", Waxaan u degdegnaa inaan kuu digo in jawaabta ay noqon karto mid kala duwan iyadoo ku xiran tiknoolajiyada la heli karo. Tusaale ahaan qalajiyaha aad u baahan tahay inaad gashato hawo-gashiga oo kaliya ka dibna bilawga kulaylka. Marka hore, heerkulku waa inuu u dhigmaa 60ºC, ka dibna, laba saacadood ka dib, u wareeji konton ama afartan iyo laba saacadood ka hor intaan diyaar u aheyn mar kale si ay u noqoto heerkulka ilaa lixdan.
Sida for aerogrill isaga isaga u baahan yahay in ay taxaddaraan. Waxay u kululaataa sida qalajiyaha korontada, laakiin kharashka fanaanka hawada kulul, kuleylka laftiisa ayaa la qaadaa marar badan. Waxaa intaa dheer, sababtoo ah qolka yar ee aerogrill, boosku wuxuu u dhaqaaji si dhakhso ah iyo berry gubi karaan. Tani waa inaan loo oggolaan. Heerkulka u dhig ilaa lixdan iyo, marka kuleylka unugyada hawo-galka hawada kululeeyo, hoos u dhig qiimaha hooseeya dhowr saacadood. Markaa waxaad ku noqon kartaa kan ugu sarreeya mar labaadna hoos u dhigi karo hoos u dhac.
Sida aad xusuusato Ma jirto shahaadada mikrowave, waxaana jira nidaamyo aan hore u cadeynay xaaladda.
Diyaargarowgu si isku mid ah ayaa loo go'aamiyaa kiis kasta. Tusaale ahaan, diyaargarowgu wuxuu go'aaminayaa wakhtiga uu dhacayo waqtiga lagu qeexay qodobkan. Dhadhanka berry waa inuu ahaadaa mid qalalan, laakiin saxarka waa in weli lagu cadaadiyaa. Casiirka waa inaanu istaagin, sida loo saxo oo ka baxo nafaqooyinka berrinka.
Sidoo kale, berry waxaa loo aqoonsan karaa diyaar u yahay midab. Tusaale ahaan, haddii berri uu leeyahay wax yar oo casaan ah oo casaan ama naxaas ah, ka dibna waa diyaar. Sidoo kale aad bay u adag tahay in la jebiyo faraheeda. Ma jiro casiir ku jira berri. Berry waa yar yahay. Halkan waxaa ah mabaadi'da asaasiga ah ee jeeg garaynta. Si aad u cuntid miro sida isla markiiba. Waa in loo oggolaadaa inay qaboojiyaan.
Haweenku waa qalalan iyada oo lagu daro dhirta kala duwan. Tusaale ahaan qorfe, bergamot ama lowska digirta. Sidoo kale, sinaha ayaa mararka qaarkood lagu daraa hawada. Tani waxay imaan doontaa dhadhan macaan. Berry Tani waxay u fiican tahay shaaha iyo khamriga lakulmay.
Hawthorn sidoo kale ayaa loo qalajiyey dhadhan leh tufaax iyo isteroberi. Urka compote ayaa soo dhajiyay maaddooyinkaas ayaa si fudud u adeegsanaya. Citrus citrus ayaa lagu daraa dhadhankaaga.
Hawthorn waa mid aad u faa'iido leh, sidaa daraadeed ha diidin naftaada inaad ku hayso jiilaalka. Taasina waa farxad weyn in lagu daro cabitaanka iyo cuntada, weligiina marnaba ma dhufan doonin wax saxarro ah. Sidaa darteed, waxaan rajeyneynaa in marka akhrinta maqaal aad fahamsan tahay sida loo qalajiyo warshad microwave iyo ma aha oo kaliya, iyo bilaabaan in ay qalalaan berry maanta.